Gudoomiye Muuday oo ah Ku xigeenka Koowaad ee Golaha Shacabka Soomaaliyeed ayaa isugu yeeray Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya inay soo xaadiraan, iyadoo dhawaan la qorsheynaayo in Baarlamaanka la horgeeyo Mooshinka laga keenay Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya.
C/wali Sheekh Ibraahin Muudey Gudoomiye ku xigeenka Golaha Shacabka ayaa sheegay Xildhibaanada safarada dheer ku maqan inay dalka ku soo xaadiraan.
“Xildhibaanada Feker waa ku kala duwanaan karaan, laakiin waa in la ilaaliyaa sharafta iyo karaamada Golaha Shacabka.” Ayuu hadalkiisa sii raaciyay Gudoomiyhu.
Qaar kamid ah xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay soo gudbiyeen Mooshin ka dhan ah Gudoomiyaha Golaha Shacabka, mooshinkaasi oo la qorsheynaayo in mudo 10 cisho gudahood la horgeeyo xildhibaanada Baarlamaanka si ay ugu codeeyaan.
March 25, 2018 tuugahaladilo2015